Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo ku tartamaya saxiixa Dejan Kulusevski – Gool FM
Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo ku tartamaya saxiixa Dejan Kulusevski
(Manchester) 19 Nof 2019. Kooxaha Manchester United iyo Arsenal ayaa la soo warinayaa inay ku tartamayaan saxiixa da’yarka reer Swedish ee Dejan Kulusevski, waxaana ay doonayaan inay la soo wareegaan xagaaga soo socda.
19-sano jirkaan ayaa heshiis joogto ah kula jira Atalanta BC, laakiin waxa uu haatan amaah kula joogaa naadiga Parma, waxaana uu u dhaliyey labo gool isagoo u sameeyey shan caawin oo kale 12-kulan oo uu u saftay hroyaalka Serie A xilli ciyaareedkan.
Sida uu warinayo Wargeyska The Sun, labada kooxood ee Man United iyo Arsenal ayaa xiiseynaya laacibkan khadka dhexe, kaasoo la rumeysan yahay in kooxda milkiyaddiisa leh uu ugu qiimeysan yahay adduun dhan 40 milyan oo gini.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Inter Milan ay weli ku jirto booska adag ee ay ku doonayaan inay ku soo xero-geliyaan da’yarkaan, inkastoo Kooxda reer Talyaani ay tartan adag kala kulmi doonto labo ka mid ah kooxaha ugu waa weyn dalka England.
Macallinka kooxda Gunners ee Unai Emery iyo Hoggaamiyaha Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la sheegay inay la dhacsan yihiin kartida hal abuurka khadka dhexe iyo heerkiisa shaqada.
Kulusevski oo inta badan ka shaqeynayay dhanka midig ee Parma xilli ciyaareedkan, ayaa Atalanta kaga soo biiray kooxda reer Sweden ee Brommapojkarna sanadkii 2016-kii.